कसरी बन्छ त ऊनी धागो ? (फोटो फिचर) | गृहपृष्ठ
Home फोटो फिचर कसरी बन्छ त ऊनी धागो ? (फोटो फिचर)
on: July 06, 2019 फोटो फिचर
कसरी बन्छ त ऊनी धागो ? (फोटो फिचर)
असार २१, काठमाडौं (अस)। नेपालमा गलैंचाको माग बढि छ । त्यसमा पनि गलैंचा निर्यात धेरै हुन्छ । खपत भने स्वदेशमा भन्दा विदेशमै बढि भएको देखिन्छ । पहिला पहिला गलैंचाबुन्ने काम नेपालको हिमाली क्षेत्रमा मात्र गरिन्थ्यो ।
जसमा राडी, पाखीजस्ता बस्तुको उत्पादन गरिन्थयो भने विगत २२ वर्ष अगाडि देखि अलि गलैंचाको काममा तिव्र गतिमा बढेको देखियो । तर गलैंचा निर्माण हुनुभन्दा अघि उनी धागो तयार गर्न के कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नुहुन पनि सक्छ । ऊनी धागो बनाउन के के आबश्यकता पर्दछ त ? ऊन कसरी बनाइन्छ ? वास्तवमा ऊन भेडाको भुत्लाबाट तयार हुन्छ भन्ने कुरा सामान्यतया हामी सवैलाई थाहा छ । भेडाको भुत्लाबाट धागो तयार हुन्छ भन्ने कुरा त सवैले सुनेकै हो बुझेकै पनि हो ।
त्यसैले अब हेरौं कसरी कुन प्रक्रियाबाट कसरी ऊन तयार हुन्छ त ? हिमाली भेगमा पालिने भेडा पालनबाट भुत्ला काटेर जम्मा पारिन्थ्यो अनि राडी पाखी बुनिन्थ्यो । अहिले यो नेपालमा ब्यवसायीक रुपमा नभएकोले विदेशबाट आयात गरिन्छ । स्वेदशमा प्रयाप्त मात्रामा ऊन नपाइने भएपछि अहिले चाइना र न्यूजिल्याण्डबाट आयात गरिन्छ । जसमध्ये बढिमात्रामा न्यूजिल्याण्डबाट आयात गरिन्छ ।
पहिला नेपालमा सिधै प्रशोधित ऊनी धागो आउँथ्यो भने अहिले कच्चा पदार्थको रुपमा सिधै प्रशोधन नभएको भुत्ला प्याकिंग भएर नेपाल भित्रिन्छ र त्यसलाई सिधै मिलमा लगेर ऊनी धागो बनाउन शुरु गरिन्छ । अब कसरी मिलमा भेडाको भुत्ला प्रोशेसिंग गरि धागो बनाइन्छ त ?
हेर्नुहोस तस्वीरहरु ?
अन्तरराष्ट्रिय गलैंचा मेलामा नेपाली हस्त निर्मित गलैंचा प्रदर्शन हुँदै